Fanakendana ny aterineto, fanakatonana ny SMS andro vitsivitsy mialoha ny fifidianana ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Fanakendana ny aterineto, fanakatonana ny SMS andro vitsivitsy mialoha ny fifidianana ao Tanzania
Hitan'ny mpikatroka zo nomerika fa mety mametra tolotra aterineto i Tanzania
Voadika ny 02 Novambra 2020 16:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, English
Sehatra an-tserasera manasongadina ny fameperana ataon'ireo mpanome tolotra aterineto any Tanzania, 27 Oktobra 2020. Sary tao amin'ny NetBlocks.org.
Tamin'ny volana Aogositra lasa teo, nahita ireo mpikatroka ny zo nomerika fa mety hametra ny tolotra aterineto i Tanzania – indrindra ireo sehatra media sosialy malaza – mialoha ny fifidianana ankapobeny fantatra fa atao amin'ny 28 Oktobra.
Azo antoka, fa tao anatin'ny 24 ora monja mialoha ny androm-pifidianana, nitatitra ireo mpiserasera ao Tanzania sy ireo nosy mizaka tena ampahany ao Zanzibar fa voafetra ny fidirana amin'ny tolotra aterineto, anisan'izany ireo sehatra media sosialy toa ny WhatsApp, Facebook ary Twitter.
VAKIO BEBE KOKOA: Manoratra ho amin'ny fahalalahana: Zo politika sy nomerika any Afrika
Tamin'ny alin'ny fifidianana, nanamafy ny fihenana niniana natao tamin'ny aterineto fantatra amin'ny anarana hoe “throttling” ny Netblocks:
Voamarina:Hita manerana an'i #Tanzania tamin'ny alin'ny fifidianana ny fanakorontanana mielipatrana tao amin'ny media sosialy; misy akony lehibe tamin'ny tolotra Twitter, WhatsApp, Instagram ary Google sy tao ao amin'ny Vodacom, Airtel, Tigo, Halotel ary Zantel; mitohy ny tranga
Nahatonga ny olona an-tapitrisany tsy nanana aterineto azo antoka hifandraisana amin'ireo namana sy fianakaviana ny tolotra voafetra, ary miezaka mafy hahazoana tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN) hidirana amin'ny aterineto:
Internet restrictions in #ZanzibarLivesMatter #ZanzibarLivesMatters #ZanzibarLivesMatter #ZanzibarLivesMatters are real. Numerous friends, colleagues, contacts currently unable to reply to my messages and finding alternatives through people with functioning vpns to communicate. #ZanzibarLivesMatter #ZanzibarLivesMatters
Tena misy ny famerana ny aterineto ao #ZanzibarLivesMatter #ZanzibarLivesMatters. Namana, mpiara-miasa, olom-pantatra marobe ankehitriny no tsy afaka mamaly ny hafatro ary mitady fomba hafa amin'ny alàlan'ny olona manana vpns miasa mba hifandraisana. #ZanzibarLivesMatter #ZanzibarLivesMatters
Nangataka tamin'ny TCRA i Tuno Nassoro mba tsy hamono ny aterineto:
Nanomboka nikorontana ny aterineto nandritra ny herinandro iray lasa izay. Azafady @TCRA_TZ miangavy anao izahay, aza vonoina ny aterineto. Manana fifandraisana manan-danja maro isika ary misy fiainana hafa manaraka aorian'ny rahampitso.
Nisioka ny fanambarany momba ny zava-nitranga ny Twitter Public Policy
Mialoha ny fifidianana rahampitso ao #Tanzania, mahita ny fanakanana sy fangejana ny Twitter izahay
Mampidi-doza tanteraka ny fanakatonana ny aterineto ary manitsakitsaka ny zon'olombelona fototra sy ny fitsipiky ny #OpenInternet #KeepItOn
Araka ny filazan'ny Paradigm Initiative, tsy manana fahefana hanidy tanteraka ny aterineto ny governemanta Tanzaniana. Saingy manome fahefana ny Fahefana Mpanara-maso ny Fifandraisana Tanzania (TCRA) ny Lalànan'ny Fifandraisana Elektronika sy Paositra (Votoaty Antserasera) 2020 mba hanome baiko ireo mpamatsy tolotra hanakana na hanivana votoaty raha heverin'ny TCRA fa voaràra ilay votoaty, hoy ny mpiaro ny zon'olombelona,” araka ny filazan'ilay mpisolovava Daniel Marari.
Tamin'ny 21 Oktobra, nanome toromarika ireo orinasam-pifandraisan-davitra ny TCRA mba “hampiato ny SMS faobe sy ny antso an-tariby faobe” mandritra ny roa herinandro izay mifanandrify amin'ny fifidianana ankapobeny, voalaza fa manivana ireo teny faneva sy ny anaran'ireo kandidà mpanohitra sasany:
Mandidy ny fifandraisan-davitra hampiato vonjimaika ny SMS faobe sy ny antso an-tariby faobe manomboka ny 24 Oktobra hatramin'ny 11 Nov 2020 mialoha ny fifidianana amin'ny 28 Okt i #Tanzania. Misy ny tatitra milaza fa tsy hita ny anaran'ireo mpitarika mpanohitra; Tundu Lissu, Maalim Saif.
Nilaza ny taratasy nosoniavin'i Eng Jame Kilaba, tale jeneralin'ny TCRA, fa “mety hanohintohina ny filaminana sy ny fiarovam-pirenena ny fitohizan'ny tolotra mandritra ny fotoam-pifidianana”, hoy ny The Observer.
Access Now niantso izany ho “fanitsakitsahana henjana ny zon'olombelona”:
VAOVAO MAFANA: Nandidy ny telcos ny governemantan'i Tanzania mba hanakana ny hafatra SMS faobe sy hanivana votoaty manokana mifandraika amin'ny fifidianana filoham-pirenena.
Ny alarobia izao ny fifidianana.
Tsy ho afaka hifampiresaka ny olona. Fanitsakitsahana mafy ny zon'olombelona ity.#KeepitOn
Mialoha ny fifidianana ankapobeny rahampitso, nanara-maso ny mety ho fanakatonana aterineto any Tanzania nanomboka ny volana aprily ny Zaina Foundation, ary nanomboka fanentanana Twitter antsoina hoe #KeepItOnTz.
Ampahany amin'ny fironana lehibe kokoa manerana an'i Afrika izay safidian'ny governemanta mba hitsabahana ny zon'ny mpiserasera ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ny hetsika famerana ny tolotra aterineto ao Tanzania — indrindra mandritra ireo hetsika misy dikany ara-politika lehibe.